Lucerne, स्विट्जरल्याण्ड को सबै भन्दा पर्यटन शहर | यात्रा समाचार
Lucerne, स्विजरल्याण्ड को सबै भन्दा पर्यटन शहर
मारिएला क्यारिल | | स्विट्जरल्याण्ड
आज म नास्ताको लागि क्याफेरियामा गएको थिएँ र मेरा साथीहरूसँग कुरा गरें, धेरै जना सहमत थिए कि स्विजरल्याण्ड एउटा सुन्दर देश हो। मैले त्यसबारे र विशेष गरी एउटा शहरको बारेमा सोच्न छोडिदिएँ। यो हुनेछ लुसारिन स्विजरल्याण्डको सबैभन्दा पर्यटन शहर हो? आज म जान्न र परिचय दिन यो मनमोहक स्विस शहर मा धेरै आश्चर्य र पर्यटक आकर्षण छ प्रस्ताव गर्दछ।
Lucerne देशको मध्य भागमा, जर्मन-भाषी क्षेत्रमा, र उही नामको क्यान्टोनको राजधानी हो। यो क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण शहर हो, सांस्कृतिक, राजनीतिक र संचार केन्द्र। लगभग thousand०,००० मानिसहरू सहरमा बसोबास गर्छन्, तर यदि हामी वरपरका अन्य साना सहरहरू र शहरहरू सहित जोड्यौं भने यो संख्या २ 80० हजार बासिन्दाहरूसम्म पुग्छ। यो एक सुन्दर तालको किनारमा छ र तपाईं यसको वरिपरि आल्प्स देख्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यो सुन्दर पोस्टकार्ड हुनको लागि सबै कुरा छ।
1 लुसेर्नमा कसरी पुग्ने
2 Lucerne मा गर्न को लागी
3 भ्रमण र लुसारिनबाट र हिंड्ने
4 लुसेर्नमा चाडहरू र उत्सवहरू
लुसेर्नमा कसरी पुग्ने
यो सजिलो र राम्रोसँग जोडिएको छ किनकि यो पर्यटकीय हो र देशको मध्य क्षेत्रको प्रवेशद्वार ठानिन्छ। स्विस रेल प्रणाली धेरै राम्रो छ त्यसैले उत्तम विकल्प भनेको रेलमार्फत त्यहाँ पुग्नु हो। यो बर्नबाट एक घण्टा र ज्यूरिखबाट आधा घण्टामा अवस्थित छ, उदाहरणका लागि, र त्यहाँ नियमित रेलहरू छन् यस र देशका अन्य शहरहरूमा दिन, हरेक दिन। तपाईं डु boat्गामा पनि त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ, सम्झनुहोस् कि यो तालको किनारमा छ, त्यसैले डु boats्गा र डुises्गा चढेर आउँदछन्। के तपाई बसको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ? होईन, यो बिर्सनुहोस्, यहाँ के तिर्दछ ट्रेन छ र यसले प्रदान गर्ने दृश्यहरू उत्कृष्ट छन्। हो, शहर वरिपरि घुम्न धेरै राम्रा बस र ट्रालीबसहरू छन्।
Lucerne मा गर्न को लागी
लुसारिनसँग संग्रहालयहरू र आर्ट ग्यालरीहरू, ऐतिहासिक चासोको स्थलहरू र स्मारकहरू छन्, र यसले पहाड र पानीको खेल खेल्ने सम्भावना पनि प्रदान गर्दछ, वरपरको पैदल यात्रा वा साइकलबाट यात्रा। त्यहाँ धेरै ऐतिहासिक पुलहरू छन् जुन भेट्न लायकको छ: Kapellbrüaker यो एक २० its मिटर लामोसहितको उत्तम हो, जुन काठले बनेको हो, मूल रूपमा १ 204 औं शताब्दीमा निर्मित। यो महाद्वीपको सब भन्दा पुरानो कभर ब्रिज हो र यद्यपि हालको निर्माण dates ० को दशकदेखि शुरू भएको हो, किनकि यसले आगो लगायो, यो अझै अद्भुत छ। यसको पछाडि यो छ पानी टावर, १th औं शताब्दीको सुदृढीकरण, र तिनीहरू सँगै क्लासिक लुसारिन पोस्टकार्ड बनाउँदछन्।
हो सैन लियोडेगार चर्चयसको टावरहरूसहित, पहाडमा हेरिरहेको, सतहौं शताब्दीदेखि सिंह स्मारक वा Löwendenkmal, जसले पेरिस र फ्रान्सेली क्रान्तिमा मारिएका स्विस गार्डहरूको एउटा समूहको सम्झना गर्दछ Spreuer ब्रिज जुन १1408 1568 बाट रियस पार गर्दछ र १ XNUMX बाट चैपल सहित। संग्रहालयहरू मध्ये एक हो परिवहन स्विस संग्रहालय, लिडो बीचमा, कार, ट्रेन, हवाइजहाज र सबै समयको मोटरसाइकलहरूको साथ, ला मध्यकालीन भित्ता वा म्यूज्याग वाल, यसको विभिन्न टावरहरूको साथ जुन भाग्यले एक चढ्न सक्छ, घडी टावर प्रदर्शन मा संयन्त्र संग, Lucerne कला को संग्रहालय, the रिचर्ड वागनर संग्रहालय र सांस्कृतिक केन्द्र KKL यसमा धेरै कन्सर्ट हलहरू छन् र हेर्नको लागि उदेकको भवन हो।
यी सबै पर्यटक साइटहरू शहरको नक्शामा चिन्ह लगाईएको फेला पार्न सकिन्छ जुन तपाईं ऐतिहासिक केन्द्रमा स्थानीय पर्यटन कार्यालयमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै पदयात्रा वा पर्यटक पर्यटनहरू छन् जुन तपाईं पैदल हिंड्न सक्नुहुन्छ र यो सबै यहाँ शुरू हुन्छ, लुसेर्नको सब भन्दा पुरानो भागमा: त्यहाँ शहरको मध्ययुगीन इतिहासको बारेमा एउटा यात्रा छ, अर्को केहि भवनहरूको अनुहारको इतिहासको साथ, अर्को। फाउंटेनहरु लाई समर्पित र केहि पनि स्थानीय कार्निवललाई समर्पित। पैदल मा तपाईं पुरानो शहर अन्वेषण र केही प्रकृति वरिपरि हिंड्न सक्नुहुन्छ।
भ्रमण र लुसारिनबाट र हिंड्ने
मा जानुहोस् माउन्ट पाइलेटस चिन्तन गर्न Lucerne अत्यधिक सिफारिस गरिएको छ। त्यहाँ ज possible्गलमा दशवटा सम्भावित मार्गहरू छन् र तिनीहरूसँग छ र एघार स्टेशनहरू वा स्टपहरू छन्। तिनीहरू कठिनाईको डिग्रीमा फरक हुन्छन् त्यसैले तिनीहरू सबै प्रकारका पर्यटकहरूका लागि डिजाइन गरिएको छ। यदि तपाईं हिंड्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ भने तपाईं एकदमै ठाडो केबलवेमा जानुहुन्छ जुन क्रिन्सबाट वा पैदल हिड्छ, जसमा चार घण्टा हिंडाई समावेश छ। वा तपाईं पनि हिड्ने को एक बिट र एक केबलवे संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ। गर्मी र वसन्त paraतुमा, प्याराग्लाइडिंग पहाडको टुप्पोबाट अभ्यास गरिन्छ र पाइलाटस फनिकुलर पार्क यसको वरिपरि चल्छ, धेरै बाहिरी गतिविधिहरू प्रदान गर्दछ।
त्यहाँ पनि छ हम्मेचवाण्ड लिफ्ट। यो माउन्ट बर्गेनस्टोकमा अवस्थित हृदय रोक्ने चट्टानबाट यात्रा गर्ने मार्ग हो जुन लुसेर्न ताललाई पर्यटकको खुट्टामा छोड्छ। लिफ्टको साथ तपाईं एक मिनेटमा हुनुहुन्छ शहरको उच्चतम बिन्दुमा, समुद्र सतहबाट ११२1132 मिटर माथि। तपाईं टुरमा पनि जान सक्नुहुन्छ ट्रोचेमेट, Pilatus को उत्तर तिर।
लुसेर्नमा चाडहरू र उत्सवहरू
छनौट गर्नु अघि, यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, बर्षको समय जुन तपाईं जान चाहनुहुन्छ, तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कुन घटनाहरू, उत्सवहरू वा उत्सवहरू हुन्छन्। को Fasnacht यो निस्सन्देह लुसेर्नमा सबैभन्दा लोकप्रिय उत्सव हो, वार्षिक कार्निवल जुन लेन्ट पछि लाग्छ। सडकमा परेडहरू छन्, सians्गीतकारहरूले बतासका वाद्य बजाइरहेका छन् र मास्क लगाएका छन्। शुक्रबारदेखि आइतवारसम्म लुसर्नका सडकहरू शाब्दिक रूपमा भेषमा परेका मानिसहरू र धेरै हल्लाले भरिएका हुन्छन्। सडक र बारहरू!
त्यहाँ पनि छ Lucerne समारोह, शास्त्रीय संगीत कन्सर्टको रचना, ईस्टरमा, ग्रीष्म र नोभेम्बरमा। यदि तपाइँ अप्रिलमा जानुहुन्छ भने तपाइँले उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ हास्य, कॉमिक्स फेस्टिवललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुहोस्, र यदि तपाईं जुलाईमा जानुहुन्छ भने निलो बलि उत्सव, अन्तर्राष्ट्रिय संगीतको र तालको किनारमा स्टेजको साथ। को गर्मी राती महोत्सव o Luzernfest ले तालको सबै किनारमा कभर गर्दछ र आतिशबाजी छ जुन देशभरिबाट मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दछ। त्यो अगस्टमा छ। र अन्तमा, ब्लुज प्रेमीहरूका लागि नोभेम्बरमा लुसेर्न ब्लूज फेस्टिवल ग्रान्ड क्यासिनोमा हुन्छ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, मलाई यो लाग्छ कि यो ट्राभल पत्रिका ठीक छ र सबै पछि लुसेर्न स्विट्जरल्याण्डको सबैभन्दा पर्यटन शहर हो। सत्य यो हो कि यसले धेरै र धेरै प्रकारका गतिविधिहरू र पर्यटक आकर्षणहरू प्रदान गर्दछ त्यसैले यदि तपाईं सोचिरहनुभएको थियो भने स्विट्जरल्याण्डको भ्रमण गर्नुहोस्… Lucerne सडक बाट नछोड्नुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » स्विट्जरल्याण्ड » Lucerne, स्विजरल्याण्ड को सबै भन्दा पर्यटन शहर
फ्रान्स मा मध्यकालीन गाउँहरू समय मा निलम्बन
लाओस, एक मिलियन हात्तीहरूको भूमि